Madaxda Caalamka oo ugu hambalyeeyay Koonfurta Sudan madax banaanida – SBC
Madaxda Caalamka oo ugu hambalyeeyay Koonfurta Sudan madax banaanida
Posted by editor on July 10, 2011 Comments
Iyada oo maalintii shalay shacabka Koonfurta Sudan ay si rasmi ah ugu dabaal degeen Madax banaanidooda ayaa waxaahaatan sii kordhaya tirada madaxweynayaasha caalamka ee ugu hambalyaynaya Koonfurta Sudan guusha Madax banaanida ay gaareen.
Madaxweynayaasha Maraykanka,Ruush-ka iyo China ayaa kamid ah madaxda dalalka ugu quwada weyn caalamka ee soo dhoweeyay Dalka cusub ee wadamada caalamka kusoo kordhay Koonfurta Sudan.
Raysal Wasaaraha Britain David Cameron ayaa isagu waxaa uu hambalyo khaas ah u diray Madaxweynaha Koonfurta Sudan Salva Kiir,isagoona ugu hanbalyeeyay guusha ay ka gaareen helitaanka madax banaanida dalkooda.
Madaxweynaha Maraykanka Brack Obama oo si khaas ah uga hadlay Dalka cusub ee Koonfurta Sudan ayaa sheegay in looga dabaaldegayo caalamka oo dhan,iyadoona madax banaanideeda uu sheegay in dad badan ay naftooda ku waayeen.
Obama waxaa uu sheegay in Dowlada Maraykanka ay kaalin weyn ka qaadatay sidii ay Koonfurta Sudan u noqon lahayd Dal madax banaan,waxaana uu sheegay in arintan ay wax badan ka badali doonto xaaladii hore ee ka jirtay guud ahaan Sudan.
Shacabka wadanka Koonfurta Sudan waxaa ay weli u dabaal degayaan Madax banaanida ay qaateen iyadoona maalintii shalay oo ku beegnayd 09 bisha July 2011 ay noqon doonto maalinta sida rasmiga ah ay Koonfurta Sudan u qaadatay madax banaanideeda.